Maxkamad ku taal Maraykanka oo la soo taagayo nin Soomaali ah oo loo haysto dilka afar ruux oo Maraykan ah – idalenews.com
Maxkamad ku taal Maraykanka oo la soo taagayo nin Soomaali ah oo loo haysto dilka afar ruux oo Maraykan ah
Maxkamad ku taal dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ah la soo taago nin Soomaali ah oo loo haysto in uu diley afar ruux oo qoys kaliya ka kooban.
Cumar Maxamed Kaalmoy oo 28 jir ah ayaa loo haystaa in uu ku diley magaalada Minot labo sano kahor haweeney u dhashay ilmo iyo xubno kale oo ka mid ah qoyskeeda.
Ninkan Soomaaliga ah ayaa lagu eedeeynayaa dilka xaaskiisa oo la oran jirey Sabrina Zephier oo 19 jir ahayd iyo walaalkeed Dillon Zephier oo 13 jir ahaa, sidoo kale ninkan ayaa loo haystaa dilka Jolene Zehpier oo ahayd soddohdii 38 jirna ahayd.
Kaalmoy ayaa waxa kale oo dacwada loo haysto ka mid ah dilka Jeremy Longie oo 22 jir ahaa. Dhammaan qoyska ayaa waxaa ay ahaayeen qaar ka soo jeedo qabiilka la yiraahdo Yankton Sioux Tribe oo ah dadka Hindida cascas Soomaalida qaarkeedna u taqaan Cali Beesteen.
Cumar Maxamed Kaalmoy ayaa dafirey in uu diley afartan ruux. Sida ay daabacday The Minot Daily News Sabtidii Kaalmoy ayaa dhagaysiga dacwadiisa waxa ay bilaabanaysaa 9 subaxnimo maalinta Arbacada iyadoo dhagaysiga dacwadana ay ka dhici doonto Ward County Courthouse.
Maydka Sabrina Zephier ayaa laga helay gurigeedan 28 January 2011, hase ahaatee gabar ay u dhashay ninka Soomaaliga ah ayaan waxba gaarin. Maydadka kale ayaa isla maalintaas laga helay qeyb kale oo ka mid ah magaalada Minogt. Waxayna dhamaan dadkaan u dhinteen xabado lagu dhuftay.
Dad goobjoogayaal ah ayaa laga soo xigtey in ay arkeen Kalmoy iyo Sabrina oo murmaya kahor inta aysan dhiman.
Cumar Maxamed Kaalmoy ayaa la sheegay in uu ku joogo dalka Maraykanka magangalyo siyaasadeed, hase yeeshee waxaa xabsiga la dhigay bishii August 2011kii isagoo uu ku jiro xabsiga la yiraahdo Grand Forks County Jail.
Muwaadinkan Soomaaliga ah ayaa haddii maxkamad lagu qaado dalka Maraykanka maalinta Arbacada ah waxa uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo maxkamad lagu soo oogo dalka Maraykanka tan iyo markii toddobaadkan ay dowlada Maraykanka ay siisay aqoonsiga rasmiga ah dowlada Federalka ah ee Soomaaliya.
Kulan looga hadlayay maamul usameynta gobolada dhexe ee dalka oo lagu qabtay Muqdisho
Maamulka Khaatumo oo soo dhaweeyay aqoonsiga ay dowlada Mareykanku siisay Dowlada Soomaaliya